Al-Shabaab oo Gaari rakaab ah ku Rasaaseeyay agagaarka Mandheera Kenya | Somali National Television - sntv.so
Home ARGAGIXISADA Al-Shabaab oo Gaari rakaab ah ku Rasaaseeyay agagaarka Mandheera Kenya
Nairobi-(SNTV)-Ku dhowaad 8 Qof oo Rayid ah ayaa ku dhaawacmay Rasaas ay dableey loo malaynayo Al-Shabaab ku fureen Gaari rakaab ahaa oo marayay inta u dhexeysa Mandheera Kenya iyo Ceel waaq Soomaaliya.
Gaarigan oo uu noociisu ahaa, Toyota Land Cruiser ayaa loo galay halka lagu Magacaabo War guduud, waxaana xaaladdooda laga deyrinaya Saddex ka mid ah Dadka ku dhaawacmay weerarka, halka dhowr Qof oo kalana lagu dabiibayo Cuspitaalka Ceel-waaq.
Dadka saarnaa Gaariga ayaan illaa iyo haatan la ogeyn tiradooda, maaddaama rakaabka qaarkii ay ka baxsadeen Rasaasta la huwiyay Baabuurka ay la socdeen, balse waxaa socda baaritaanno lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen.
Waxaa jira dhaliilo ay Dadka degaanka usoo jeedidanyaan masuuliyiinta Dowladda Kenya, markii ay madaxda Gobolka ka jawaabi waayeen xiriirro ku aaddan ammaanka oo ay la sameeyeen Shacabka halkaasi ku dhaqan.
Previous articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda oo berri booqanaya Turkey
Next articleEng; Yariisoow: Waxaa naga go’an in ay Caasimaddu ka mid noqoto Magaalooyinka ugu ammaanka fiican Adduunka